किन कोहि मान्छे निद्रामा बर्बराउँछन् ? यस्तो छ कारण , कसरि गर्ने समाधान ? – ramechhapkhabar.com
किन कोहि मान्छे निद्रामा बर्बराउँछन् ? यस्तो छ कारण , कसरि गर्ने समाधान ?
हामीमध्ये केहीलाई निद्रामा कुरा गर्ने बानी हुन्छ । राति सुतेका बेलामा यसरी बर्बराउनुलाई सोम्नीलोकी भनिन्छ । यो कुनै रोग होइन तर यसरी निद्रामा बर्बराउँदा तपाईंसँगै सुत्ने मानिसलाई डिस्टर्ब चाहिँ हुन्छ ।
निद्रामा बर्बराउनुका धेरै कारण हुन सक्छन् । तपाईं धेर तनाव लिनुहुन्छ, डिप्रेसनको शिकार हुनुहुन्छ, रक्सी पिउनुहुन्छ र पर्याप्त सुत्नुहुन्न भने निद्रामा बर्बराउने समस्या आउँछ । तपाईंको परिवारमा कसैलाई निद्रामा कुरा गर्ने बानी छ भने तपाईंलाई पनि हुनसक्छ । यसका साथै तपाईंका
तपाईंलाई निद्रासम्बन्धी रोग छ भने पनि बर्बराउनुहुन्छ । चिकित्सकलाई देखाइहाल्नुस् । नडरानुस्, यो कुनै रोग हैन । तर दिनदिनै निद्रामा बर्बराउन थालनुभयो भने चाहिँ मनोविज्ञानवेत्तासँग सम्पर्क गर्नुस् ।